Afaka Miresaka Ny Fiovàn’ny Politika Momba Ny Fako Ao Libanona Ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2015 4:25 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Narian'ny governemanta Libane tany amin'ireo faritra toy tamin'ity havoana any Monte Verde vao mivoaka ny Beirouth ity ny fako. SARY: tol3etre7etkom.
Antenaiko ny ho afaka hanazava izany hoe mahatsapa kiriko amin'ny fireneny izany. Tena fihetseham-po mampalahelo be io. Mahatsiaro tena ho meloka ianao mahatsapa izany voalohany, saingy tsy afaka fotsiny izao hanampy azy. Tsapanao tsara ny tombony mbola anananao, ary fantatrao fa na eo aza izany rehetra izany, mbola manana fiainana azo atao hoe tsara ihany ianao. Kanefa tsy ampy intsony izany.
Tena misy zavatra tsy mety ao Libanona, ary fantatsika tsara fa tafiditra amin'izany isika. Tsy ireo olana maro izay atrehantsika ankehitriny monja no resahako: fa miresaka momba-nà zavatra tena fototra mihitsy, mikasika ny fomba fijerin'ity firenena ity ny tenany.
Niaina tao anatin'ny fangaro hafahafan'ny fomba fitaizàna misy tsy firahirahiana ny hafa sy tsy fahafahana manampy isika. Nijanona tsy nanonofy mihoatra ireo metatra vitsivitsinà toerana naorintsika manodidina antsika isika, satria tsy firenena iray afaka mandray ny fifanakalozankevitra momba ireo olany no hitantsika. Tafalentika lalina tao anatin'ny hadalàna ara-pizarazaràntsika ihany isika, ary tsy ho adinonay velively ny hampahatsiahy antsika ny fomba tsy nahomboazantsika mba hanao zavatra momba azy io.
Izany no fomba nampiainina antsika, ary izany ihany no hany fomba mba haintsika iasàna. Amin'ny lafiny iray, teny an-dalana teny, isan'andro, nosarahantsika tamin'ny an'ireo olona tsy mitovy amintsika ireo olana mampiasa loha antsika tsirairay avy isanandro, na dia matetika aza, mitovy ireny olana ireny.
Nanam-bitana aho niaina tanaty Libanona tsy voaloton'izany tsy fahafahana manoatra izany. Niaina ny hafaliana ara-politika aho, fomba filaza voazavan‘ilay mpikaroka momba ny olombelona amin'ny lafiny rehetra, David Graeber, ho toy ny fiainana amim-pahatsapàna ho afaka manome dikany ny zavatra mitranga, amin'ny fahatratrarana ny tanjona iombonana — ny fahatsapàna fa matoky ny olona manodidina anao ianao satria samy natao hitady vahaolana amin'ny olana iraisana.
Vao haingana izao, niainako izany tamin'ny fiarahako tamin'i طلعت ريحتكم (‘tol3et re7etkom’, midika hoe ‘Maimbo Ianao’), hetsi-bahoaka naorina ho setrin'ny tsy fahafahan'ny governemanta mamaha ny olan'ny fako.
Nilomano tanteraka tao anatin'ny fako izahay—taorian'ny nanakatonan'ireo mponina tao amin'ny tanànan'i Naameh ny fanariam-pakony, izay nampiasain'ireo faritr'i Beirouth sy Mont Libanona—izany hoe efa ho ny antsasaky ny fitambaran'ireo olona ao amin'ny firenena manontolo. Fantatry ny governemanta hatry ny taona maro fa ho feno tanteraka any aoriana any ny fanariam-pakon'i Naameh, nefa tsy mba nitady hevitra hafa izy, hevitra miaro ny tontolo iainana amin'ny fanalàna ny fakon'i Beirouth. Ny nataony, nandray ny fanapahan-kevitra hizarazara ireo fako any amin'ireo toerana malalaka isan-karazany any ny governemanta, mitoetra eny akaikin'ireo toerana fonenana sy ala ny ankamaroan'izany. Mafy tokoa ny vokany ara-pahasalamana sy tamin'ny tontolo iainana.
Nanary ny fako teny amin'ireo toerana malalaka ny sampana miandraikitra ny fanesorana fako ao amin'ny governemanta Libane, tsy mijery akory ireo zavatra atao eo amin'ny tontolo iainana manodidina. SARY: Joey Ayoub/Hummus natao Hampieritreritra.
Mikendry vahaolana maharitra ny Tol3et re7etkom, vahaolana apetrak'ireo manampahaizana momba ny tontolo iainana sy miompana amin'ny famerenana ny fisahanana ny fako eo anivon'ny kaominina, ary ny fametrahana ny tetikasa fanodinana fako eo amin'ny firenena manontolo. Andro vitsy lasa izay, nihaona tamin'ny ekipa mpikarakara ifotony aho. Avy tamin'ny vondron-taona samihafa izahay, tanora vavy sy lahy ny ankamaroany, ary avy any amin'ny fiaviana maro samihafa. Fantatra tamin'ny fitiavana ny hanova ny fomba fanao eo amin'ny firenena ny ankamaroanay, fa ny sasany kosa tena mbola vaovao be. Ary na avy amin'ny lafiny ara-politika samihafa aza izahay, tonga dia fantatray tsara fa mila ny fandraisan'andraikitry ny tsirairay io ady io.
Araka izany, nanomboka niresaka izahay, ary tamin'ny farany, tonga tamin'ny tsoa-kevitra tsotra : hoe tsotra ihany ny zava-miseho amin'izao. Nabaribarin'ny olan'ny fako misy amin'ìzao fotoana izao indray ireo andianà mpitarika ady lasa mpanao politika, izay antsointsika hoe governemantantsika, ho tsy misy ilàna azy. Tsy nahavita niatrika olana iray azo lazaina ho tena tsotra izy ireo, izay nanànany taona maro mba niomànany. Tsy nandray andraikitra mihitsy izy ireo, noho ireo antony diso fantatr'ireo Libane maro, ary nanao ny zavatra tena hainy indrindra: manemotra lava ny fandraisana andraikitra mandra-pidonan'ny loza lehibe amin'ny firenena.
Fantatsika ny anton'ilay olana, fantatsika hoe ahoana ny hamahàna azy, ary fantatsika hoe inona no hiseho raha tsy vitantsika ny manao an'io. Takian'ny tol3et re7etkom ny governemanta mba hametraka vahaolana tonga dia ampiharina avy hatrany sy miaro ny tontolo iainana amin'ny olan'ny fako, izay mety hanamboatra ireo fahasimbana vokatry ny fanariana fako tany amin'ireo valan-javaboahary, lavadrano, ary ireo toerana manakaiky ny trano fonenana. Takian'ilay hetsika ny hampisehoana ireo vahaolana rehetra amin'ny manam-pahaizana araka ny fiarovana ny tontolo iainana, ary mba ho fandraisana andraikitra tena haharitra tokoa no hatao. Ary farany, te-hahita ireo olona rehetra tompon'andraikitra tamin'io olana io ny tol3et re7etkom, sy ny hanaovana fanadihadiana mangarahara momba ny vola nolanilaniana fahatany ary/na nangalarina.
Tena hafaliana marina ny mahita ireo olona miasa tsy mahalala sasatra ho an'ny zavatra tena inoany. Fantatray tsara hoe inona no toherinay, kanefa fantatray ihany koa hoe tsy maintsy hiseho izany. Tsy maintsy maka bahana izahay. Efa mahita fiovàna sahady izahay eny rehetra eny. Efa mihamaro ireo kaominina manomboka mametraka ny fomba fiasany maharitra, tsy miandry ny rafitra tsy mitondra vokany ankehitriny. Andraikitray ny mitazona io tsindry io, ho an'ny fahasalamantsika rehetra.
Raha te-hahalala bebe kokoa momba ireo zavatra ataon'ny tol3et re7etkom, jereo ny pejy Facebook-ny ary ny fanentanana IndigeGogo.